စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အခေါင်းတွေကို နောက်ဆုံးရိုက်သွင်းလိုက်သော သံတစ်ချောင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« UN must act to stop human rights abuses in Myanmar
ညက(ဓါးပြ)တိုက်သွားတာလည်းမောင်ရင်၊ ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးတာလည်း မောင်ရင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာ နဲနဲစဉ်းစားပါရစေအုံး »
အာဖရိကလူမဲတွေက ဥရောပတိုက်သား လူဖြူတွေကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ကျေးကျွန်အဖြစ် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက် ဒါဟာ လူသားတိုင်းလိုက်နာရမဲ့ လောကပါလ တရားဖြစ်တယ်လို့ ဘိုင်ဘယ်ကျမ်းကို ကိုးကားပြီး လူလူချင်း ကျွန်လုပ်နေခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။ ဘုရားသခင်က ချမှတ်ထားတဲ့ ဒီသဘာဝတရားကြီးဟာ ကျေးကျွန်တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက်လည်းဖြစ်တာမို့ ဆန့်ကျင်ရင် သဘာဝလောကကြီး ဖေါက်လွှဲဖေါက်ပြန်ဖြစ်ပြီး ကပ်ဆိုးတွေ ကျနိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ဟိန္ဒူတွေရဲ့ လူတွေကို အမျိုးအနွယ် ဇာတ်အရ အလုပ်အကိုင်၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားထားခြင်းစနစ်နဲ့လည်း ထပ်တူဖြစ်ပါတယ်။
“Slaves, obey your earthly masters with fear and trembling” (Ephesians 6:5). “Tell slaves to be submissive to their masters and to give satisfaction in every respect” (Titus 2:9).
According to Robert Dabney (1820-1898), it was part of God’s natural order inafallen world that ‘superior’ races should enslave ‘inferior’ races for their own spiritual, moral and material good, and for the social stability of everybody else.
ကျွန်ဟာ ကျွန်နေရာမှာနေရင် လောကကြီးက တည်ငြိမ်မယ်။ ပဋိပက္ခတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မယ်ဆိုတာကို တိုက်ရိုက်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သွယ်ဝိုက်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယဉ်ကျေးတဲ့ မည်သည့်လူသားကမှ မပြောကြတော့ပါဘူး။ သို့သော် ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က ရိုဟင်ဂျာတွေက ကိုယ့်နေရာမှန် အခစား၊ အစေခံ၊ ကျွန်က ကျွန်နေရာမှာ မနေလို့ အခုလို သတ်ပွဲ၊ သေပွဲတွေဖြစ်ရတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရင် ကောက်ယူလို့ရနိုင်တဲ့ စကားမျိုးကို ဘာဖြစ်လို့ ရေးသားလိုက်ရသလဲဆိုတာကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ အဖြေပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒီအချက်ကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထဲ့သွင်းရေးသားခဲ့ရတာလဲ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာရဲ့ ဘယ်လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ထင်လို့ ဒီအချက်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ရတာလဲ။ ဒီလိုရေးသားမှုမျိုးဟာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးနွယ်နှစ်စု ပြန်လည်သဟဇာတဖြစ်ရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ မဟာညာဏ်ကြီးရှင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများက ယုံကြည်ပြီး ထည့်သွင်းခဲ့ရတာလဲ။
ဒေါက်တာမျိုးမြင့်၊ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်နှင့် ဦးကိုကိုကြီးအပါအဝင် ကော်မရှင်လူကြီးမင်းများကို “လူကို လူအဖြစ် မမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင် လူအဖြစ်ကို တစ်ကယ်ဆုံးရှုံးသွားတာက ဘယ်သူလဲ”လို့ မေးမြန်းချင်လှပါတယ်။ ကိုယ်ဖေါ်တဲ့ဆေး၊ ကိုယ်မစားရဲဘူးဆိုရင် သမိုင်းဆိုတဲ့ တရားသူကြီးက ဘက်မလိုက်ဘူး၊ လာဘ်ထိုးလို့ မရဘူး၊ မညှာတတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို အဖိုးအဖွား၊ အဖေအမေနဲ့ သားသမီး၊ မြေးမြစ်တိုင်အေင် အိမ်ထောင်စုစာရင်း တမင်ခွဲမပေးဘဲ တစ်ခုတည်းထားပြီး လူဦးရေပေါက်ဖွားနှုံးများတယ်လို့ လည်ဆယ် စွပ်စွဲခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကြိုက်တဲ့လူမျိုးကို အခုရိုဟင်ဂျာတွေလို မိသားစုလေးဆက်လောက် အိမ်ထောင်စုစာရင်း တစ်ခုတည်းထားပေးရင် ဒီလိုဖြစ်နေမှာဘဲဆိုတာကို စာနာတရားထားပြီး စဉ်းစားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်း ကော်မရှင်မှာ ရှိဟန်မတူဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ပညာတတ်တွေရဲ့ ရခိုင်ကော်မရှင်က အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လူဦးရေပေါက်ဖွားနှုံးများလွန်းတယ်လို့ စစ်အစိုးရလေအတိုင်း သံယောင်လိုက် အပြစ်တင်စွပ်စွဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ မိသားစု စီမံကိန်း သဘောမျိုးနဲ့ ပညာပေးတာမျိုးကို ကျနော်တို့ လက်ခံပါတယ်။ သို့သော် လူကို လူအဖြစ်မြင်ဖို့လိုပါတယ်။ နှိမ့်ချအထင်သေးတဲ့အမြင်(Sterootype)နဲ့ မချဉ်းကပ်သင့်ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူ့မျိုးဆက်တစ်ဆက် (One Generation)ကျော် အသက်၁၈နှစ်ပြည့်တာတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လက်ထပ်ခွင့် မရှိ။ လက်ထပ်လိုရင် လျှောက်လွှာတင်ရတာ၊ လာဘ်ထိုးရတာ၊ လက်ထပ်ခွင့် မရှိဘဲ လက်ထပ်သူတွေကို ထောင်ချပစ်တာ၊ မိသားစုတစ်ခုကို ခလေးနှစ်ယောက်ထက် ပိုမယူရဆိုတာတွေနဲ့ လူမဆန်တဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကြားက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လူဦးရေပေါက်ဖွားနှုံးများတယ်လို့ ပြောချင်သေးရင် မူလက လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်။ အခု ဘယ်လောက်ရှိပြီမို့ လူဦးရေ တိုးပွါးနှုံး ဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ကိန်းဂဏန်းတွေနှင့် ဖေါ်ပြဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာလောက်တောင် မသိဆိုးရွားနိုင်လှတဲ့ သနားစရာ အသုံးချခံ ခပ်ချာချာ ပညာတတ် ရခိုင်ကော်မရှင်ဟာ အရပ်ထဲ ရွာရိုးလျှောက် ထင်ရာမြင်ရာ အတင်းလိုက်တုတ်တဲ့ အမယ်အိုကြီးအဆင့်ဘဲရှိနေတာကို မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
လူရာချီ အသတ်ခံရ၊ သိန်းချီအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မျိုးရိုးနဲ့ချီ၊ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ခိုးဝင်လာသူတွေ၊ အောက်တန်းစားတွေ၊ အကြမ်းဖက်လိုသူတွေ၊ ကော်မရှင်ကို လိမ်သူတွေအဖြစ် အခွင့်ရတိုင်း မညှာမတာ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ထိုးနှက်ထားတာက အစီရင်ခံစာတစ်ခုလုံးမှာ မြင်မကောင်း၊ ရှုမကောင်းလောက်အောင် ဗလပွ ပွစာကြဲနေပါတယ်။ ရခိုင်တွေဘက်ကျတော့ အစွန်းရောက်အုပ်စု ကွက်ကွက်ကလေးကိုတောင် ယောက္ခမနို့ သမက် မစို့ဝန့်သလို ရွှေဖေါ့ရိုးနဲ့ မဝံ့မရဲ ရွယ်ထားတာလောက်ကိုပင် သန်းရှာသလို အတော်လေး ဖြဲရဲရှာယူရတယ်။ ဒါတောင် ကော်မရှင်က မျှမျှတတဝေဖန်ထားပါတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်အောင် မကောင်းတတ်လွန်းလို့ ဘုရားစူးလွတ်၊ မိုးကြိုးပစ်လွတ် ထည့်ပေးလိုက်ရဟန်တူပါတယ်။
ဦးကိုကိုကြီးက ကျနော်တို့ မျှမျှတတ ဘက်ပေါင်းစုံက ထည့်သွင်းထားပါတယ်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။ ၁၈၆၁မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တွေလွတ်မြောက်ရေး အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်သမ္မတ Abraham Lincoln က My concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God’s side. ပြောခဲ့တယ်။ ဦးကိုကိုကြီးတို့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် လူကြီးမင်းများအနေနှင့် အမေရိကန်သမ္မတကြီး အဗရာဟင်လင်ကွန်းနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ မှန်တဲ့ဘက်မှာ မှန်တဲ့အတိုင်း ရပ်တည်ရဲဖို့ထက် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာကို မှန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပမ်းပမ်း ကြိုးစားနေတာကို တွေ့နေရတဲ့အတွက် သနားစရာတောင် ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါ ဦးကိုကိုကြီး။ ကိုယ်စိုက်တဲ့အပင်ဘဲ ကိုယ်ရိပ်ရမှာပါ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးရပါတယ်။ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော။
မိန်းမတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ခလေးငယ်တွေအပါအဝင်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်တွေ၊ နစက၊ လုံထိန်းတွေရဲ့ ပါဝင်ကျူးလွန်မှုတွေကို ဗီဒီယိုကင်မရာ အထောက်အထားတွေအရကော၊ မျက်မြင်သက်သေများအရပါ အထင်အရှားရှိနေခဲ့တာကို ကော်မရှင်က စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ခဲ့ပါသလား။ အထိကရုန်းဖြစ်စဉ်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့ စစ်ဖက်၊ နယ်ဖက်အရာရှိတွေကို စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က မစစ်ဆေးနိုင်အောင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နယ်ပြောင်းပစ်တာကိုကော ကန့်ကွက်ဘူးပါသလား။ RNDP အပါအဝင် ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေက လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုတွေ ပြန့်ပွါးအောင် လူသိရှင်ကြား မိန့်ခွန်းတွေပြော၊ စာရွက်စာတန်းတွေထုတ် လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာကိုကော ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ အစိုးရကို ထောက်ခံတင်ပြခဲ့ပါသလား။ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေက အထောက်အထားနဲ့ ထောက်ပြထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ပြီး မြှုပ်နှံထားတဲ့ကျင်းတွေကို ပြန်လည်တူးဖေါ်ပြီး စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ဘူးပါသလား။ ပညာရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးစတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းက ရှိရှိသမျှ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်လောက် ရက်ရက်စက်စက် အချိုးနှိမ်၊ အပစ်ပယ်ခံထားရလို့ အဖက်ဖက်က အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေရတဲ့ လူ့မျက်နှာမွဲ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူလိမ်၊ လူညစ်၊ အကြမ်းဖက်သမား၊ လူရိုင်းတွေအဖြစ် မညှာမတာ ရက်ရက်ရောရော ပုံဖေါ်နေခဲ့တဲ့ ခြင်္သေ့အတုကော်မရှင်က ခြင်္သေ့အစစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ယုန်ကလေးဖြစ်သွားပြီး နှာစေးသွားဟန်တူပါတယ်။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်နှင့် ညီညွတ်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ခပ်တည်တည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဝင် လူကြီးတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ အစိုးရအားကိုးနဲ့ အိမ်ကျယ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ နတ်ဝတ်ပုဆိုး တိမ်မီးခိုး ဆင်မြန်းထားတဲ့ ပြည့်ရှင်မင်းလို လဇင်းကျွတ်ကြီး ငေါင်းတောင်းတောင်း ဖြစ်နေတာကိုလည်း သတိထားမိကြဟန် မတူဘူး။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ သူတို့ကို အလုပ်အကျွေးပြုမဲ့ ပညာတတ်အုပ်စုဆိုတာကို အရင်ကလည်း အမြဲတမ်း လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာဖွေ အသုံးချနိုင်ခဲ့သလို အခုလည်း အရင်အတိုင်း အလျှံပယ်ရနေတာပါဘဲဆိုတာကို ရခိုင်ကော်မရှင်က သက်သေပြလိုက်တာပါဘဲ။
ကော်မရှင်ရဲ့ ယေဘုယျ တင်ပြချက်တွေ၊ အကြံပြုချက်တွေမှာ ကောင်းမွန်တာတွေရှိပေမဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်ခုလုံးက
(၁) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အကာအကွယ်ပေးရန်
(၂) ရခိုင်အစွန်းရောက်အုပ်စုကို မထိခိုက်စေရန်
(၃) ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံမဲ့ ခိုးဝင်သူ လူဆိုးများအဖြစ် ပုံဖေါ်ရန် ဆိုတဲ့
ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုတော့ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာကို အထင်အရှား တွေ့ရတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ရခိုင်ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာဟာ ဦးသိန်းစိန်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကော်မရှင်တွေအားလုံးအတွက် မသာခေါင်းကို နောက်ဆုံးရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ သံတစ်ချောင်းနဲ့လည်း အလားသဏ္ဍန်တူပါတယ်။ ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့ဆို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နောင်အနာဂတ်မှာ ကော်မရှင်ဆိုတာများဖွဲ့ရင် မျက်နှာပြောင်တိုက် ပါဝင်ရဲသူများဟာ အာဂယောင်္ကျားများသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။
သို့သော် ဒို့နိုင်ငံမှာက အာဂယောင်္ကျားတွေ ရိုက်သတ်လို့ မကုန်အောင် ပေါများလှတာမို့ – ကိုလွှမ်းမိုးရေ – ကျနော်တို့တွေ အမျိုးအတွက် ငိုနေရတာတွေက တာရှည်အုံးမှာပါဗျာ။
မေလ ၁၊ ၂၀၁၃
Tags: Abraham Lincoln, Burma, Epistle to the Ephesians, God, History, Muslim, Thein Sein, United States
This entry was posted on May 2, 2013 at 4:30 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.